Home Wararka Maxaa Miskiinkaan Kamerada Horteeda kaga Ooysiiyey?
Maxaa Miskiinkaan Kamerada Horteeda kaga Ooysiiyey?
Mid ka mid ah dadka ka xoogsada dekedda Muqdisho ayaa waxaa uu ku hor ooyey kamerayaasha kadib markii uu ka tanbadiyey culeyska nololeed ee ay ku hayaan kuwa aan u naxayn, isla markaana uusan lahayn awood uu isaga celiyo. Allow u kaalmee adigaa karee.
Waxaa wax laga xumaado ah in cid waliba ay xanuun ka dhaxasho dowladdii Farmajo oo loo mashxaraday laba sano ka hor, taas oo ku baaqeysay Nabad iyo Nolol.
Xoogsatadii iyo Xamaalatadii ayaa ka cabanaya in xataa loo diidan yahay inay noloshooda raadsadaan, kuwaas oo ay ku xiriiraan caruur iyo dad ay quudiyaan. Waxaa qaarkood la dul saaray canshuur aysan qaadi Karin oo aan waxba loogu qaban balsa lagu dhisayo ciidan beeleed laga dhisayo meelo gaar ah sida gobolka Gedo, hadhowna la rabo in iyaga lagu gumaado. Waxaa la sameystay shirkado gaar ah oo dowladihii hore lagu eedeynayey inay sameysteen oo ku shaqeysteen. Eedda waaba la gartaye Kuwaan laga caabanayo yaa nagu fasaxay maxaasa loo sameystay?
Kuwa badan oo reer Muqdisho ah waxaa laga xeray jidadkii ay nolol ku raadsan lahaayeen. Kuwa kale waaba la dilay oo nafta ayaa laga qaaday, kuwana iyagoo nool ayey silacsan yihiin waana bulshadii ay dowladdu ballanqaaday inay nabad iyo Nolol u sameyn doonto. Tolow ma Nabaddii iyo Noloshii ayaa si kale loo qeexay oo waxaa is badalay macnahoodii erayadaas kadib intii ay dowladdaan timid oo Nadad=Nabad la’aan, Nolol=Nolol la’aan ?
Marka dadka qaar la yiraahdo dowlaaddan Farmajo iyo Kheyre khaladkaan ayey sameyneysaa oo dadka dhibaato ayey ku haysaa ee aan ka hadallo ama uga naseexeyno, waxay la soo boodayaan khaladkan oo kale dowladihii horaba waa sameeyeen. Waa yaabe khaladkii ay dowladihii hore sameeyeen ma wuxuu dowladdaan u banneynayaa inay khaladkii oo kale ama ku kale ay sameyso?
Runtii waa maya. Ma jirto cid xaq u leh khalad inay shacbiga ku sameyso ama mid hore ha noqdo ama khalad cusub ha noqdee, wixii dawladihii hore ka xumaaday waa in cashar laga bartaa.
Haddaba dowladdaan waa dowlad dhibaato joogto ah ku haysa shacbiga Muqdisho ku dhaqan, waxayna u muuqataa inaysan ka gaabin doonin dhibaatooyinkii ay geysatay dowladdii Kacaanka haddii aan hadda la iska qaban.
Colaado fida oo dalka wada saameeya, kumanaan dad ah oo dhinta, kumanaan dhaawacma iyo kumanaan kun oo barakaca ayaa ah waxa laga dhaxlo dowladaha aan la iska qaban marka ay khaladadka bilaabeyso oo aan la sixin inta aysan is mahadin ama la badalin.
Dowladdaan oo jidkaas ku socotaa waxay burburisay Barlamaankii. Waxay Xaraashtay shidaalkii iyo Kalluunkii dalka, waxay kala dirtay ciidankii xooga Dalka Somaliyeed. Waxay kala dirtay ciidankii Nabadsugidda qaranka. Waxay caburisay siyaasiyiintii dadka u hadli lahaa oo hadda wada cabsanaya. Waxay iibsatay Xildhibaanadii iyo Saxaafaddii.
Waxay hadda soo wadataa ciidamo Itoobiyaan iyo Erteriyaan isugu jira oo cidii hadashaa Madaxa looga jebin doono. Haddaba waa yaabe maxaa dhiman oo la sugayayaa ma inta qof waliba gurigeeda loogu imanayaa misa inta Xamar madaafiic loo qeybinayo sidii kacaanka.
Miskiinkii caloolxumada la ooyey halkaan ka daawo haddaad damiir leedahayna ka damqo oo wax ka qabadka ka qeyb gal.